1960-yadii Afgaanistaan waxay ahayd mid aad uga duwan sida ay maanta tahay. U fiirso sida ay Afghanistan ahayd - iyo sida ay mar kale noqon karto. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada 1960-yadii Afgaanistaan waxay ahayd mid aad uga duwan sida ay maanta tahay....
1960-yadii Afgaanistaan waxay ahayd mid aad uga duwan sida ay maanta tahay. U fiirso sida ay Afghanistan ahayd – iyo sida ay mar kale noqon karto.
Dareenka nabdoon iyo wejiyada dhoolla -caddaynta leh ee ka buuxa sawirrada 1960-kii Afqaanistaan waxay aad uga fogayd sawirrada manta ee ah waddan dhex-jibaaxaya dagaal iyo musuqmaasuq baaxad leh.
Afgaanistaan ka hor Taalibaan, waxay lahayd maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo saamayn ay ku lahaayeen waddamada reer Galbeedku 1960-yadii iyo horraantii 70-meeyadii ayaa abuuray jawi-siyaasadeed oo aad uga duwan kii hore ee la soo dhaafay. Bal dhaayo 1960-kii Afgaanistaan sawiradii laga qaaday.
Siday Nolosha Afgaanistaan ahayd Taalibaan Ka Hor
1950-yadii iyo 1960-yadii waxay ahaayeen waqti rajo u leh dadka deggan Afgaanistaan. Colaadaha gudaha iyo faragelinta shisheeye ayaa aagagga ku habsaday qarniyo, laakiin sanadahaasi danbe waxay ahaayeen kuwo nabdoon.
1930-yadii, boqorkii da’da yaraa ee horumarka jeclaa Amanullah Khan wuxuu go’aansaday inuu casriyeeyo Afgaanistaan ​​oo uu ka hirgeliyo guulaha bulsho, siyaasadeed, iyo dhaqaale ee uu ku arkay socdaaladiisii ​​uu Yurub ku tegay.
Wuxuu weydiistay waddamada ugu qanisan adduunka inay gacan ka geystaan ​​sidii loo hagaajin lahaa dib -u -habeynta uu la damcay, maxaa yeelay wuxuu arkay qiimaha istiraatiijiyadeed ee Afgaanistaan leedahay wuxuu na fahmey in Afgaanistaan casriyeysan oo saaxiibtinimo u leh danahooda gaarka ah ee gobolka, ay qiimo u leedahay quwadaha adduunka.
Intii u dhexeysay 1945 iyo 1954, Mareykanka wuxuu siiyey in ka badan $ 50 milyan oo deyn ah dhismaha jidka weyn ee Kandahar-Herat. Sannadkii 1960-kii, kaalmada dhaqaale ee Maraykanku siiyo Afgaanistaan ​​waxay gaadhay $ 165 milyan.
Lacagtaas inteeda badan waxay hagaajinaysay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka; hayeeshee marka ay timaaddo maalgelinta ganacsatada Maraykanku way ka digtoonaayeen.
Laakiin Midowgii Soofiyeeti ma lahayn wax qorshe ah. Sannadkii 1960-kii, USSR waxay bixisay deyn ka badan $ 300 milyan. Sannadkii 1973-kii, tirade dayntaasi waxay gaadhay ku dhawaad ​​$ 1 bilyan. Waxay sidoo kale ka biqiwaayeen inay maalgashi ku sameeyaan warshadaha saliidda iyo batroolka ee gobolka, taasina waxay keentay, in Afghanistan ay ka hesho kaalmo dhaqaale midowgii Soofiyeeti marka loo eego dalalka kale ee soo koraya.
Kabul, oo ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalka Afgaanistaan, ayaa markii ugu horreysay lagu arkay isbeddellada waaweyn. Dhismayaasha casriga ahi waxay bilaabeen inay ka ag muuqdaan dhismayaasha dhooboa dhqameedka ah, waddooyin cusubna waxay u fideen dherer & balacba magaalada iyo meelaha ka baxsan.
Dumarku waxay heleen fursado waxbarasho oo ka badan sidii hore – waxay dhigan kareen Jaamacadda Kabul, burqooyinkuna waxay ahaayeen ikhtiyaari. Qaarkood waxay ka talaabsadeen soohdimaha dhaqankooda, ahaa muxaafidka waxayna xidheen dharka fashiyonka ah iyo dharka isboortiga.
Dalku wuxuu soo jiitay booqdayaal ka kala yimid daafaha dunida, dalxiisayaashiisuna waxay ku noqdeen guryahoodii si ay ugu sheegaan qoyskooda iyo asxaabtooda jardiinooyin qurxoon, qaab-dhismeed cajiib ah, buuro qurux badan, iyo dadka deegaanka oo saaxiibtinimo leh.
Lacagta laga helo laba dal oo awood leh ayaa aakhirka noqota mid aad u sii hurisa dabka & damacyada siyaasadeed ee sii kordhaya hayeeshee labaatan sano oo farxad leh, arrimuhu waxay u muuqdeen inay dhabaha hagaagsan ku socdaan.
………Lasoco qaybaha danbe
Previous articleAfghanistan: thousands stranded in Kabul as Taliban go door-to-door
Next articleXalka 2-dowladood weli miiska ma saara